चितवनको भरतपुरमा एकै परिवारका तीन जनामा कोरोना संक्रमण देखियो | PBM News.com
चितवनको भरतपुरमा एकै परिवारका तीन जनामा कोरोना संक्रमण देखियो
चितवन १० जेठ । चितवनमा एउटै परिवारको तीनजनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ । भरतपुर वडा नं. ६ केशरबाग बस्ने आमा बुबा र छोरा गरी तीनजनामा देखिएको हो । ७४ वर्षका बुबा र ७३ वर्षका आमामा हिजै संक्रमण पुष्टी भएको थियो भने ५२ वर्षका छोरामा संक्रमण भएको आज पृष्टी भएको हो ।
चितवनमा संक्रमित भेटिएको क्षेत्र भरतपुर–६ केशरबागमा विवरण संकलन गर्दै सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्य अधिकारी यी बाबु, आमा र छोरा भारतको राजिव गान्धी क्यान्सर अस्पतालमा उपचार गराएर जेठ तीन गते घर फर्केका थिए । ७४ वर्षीय बाबुको क्यान्सर रोगको उपचार गराएर उनीहरु दिल्लीबाट फर्किएका थिए । ‘बिहीबारको परीक्षणमा बाबुआमालाई पूर्ण रुपमा संक्रमित देखाएको थियो । उनीहरुसँगै गएर फर्केका छोराको परीक्षणमा प्रस्ट नतिजा आइसकेको थिएन । त्यसैले अस्पतालमै राखेका थियौं । शुक्रबार दोहर्‍याएर फेरि नमुना परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि भएको हो,’ भरतपुर अस्पतालको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. भोजराज अधिकारीले भने ।
भरतपुर अस्पतालले कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल र कोरोना प्रयोगशालाको पनि व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । चितवनमा अहिलेसम्म एक हजार ३ सय ७१ जनाको स्वाब परीक्षण भएको छ । जसमध्ये ७ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ । पुष्टि भएकामध्ये चितवनका दुईजना उपचारपछि निको भएर घर फर्केका छन् । उपचारमा रहेका पाँच जनामध्ये तीन जना चितवन र दुई जना नवलपुर जिल्लाका हुन् ।